ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ၊ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရှီတိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တွင်ကျင်းပသည့် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၌ သဘာပတိအဖြစ်တက်ရောက်စဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က လူသားမျိုးနွယ်စု ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးကိစ္စရပ်များ နှင့် စိတ်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းအတွက် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား မြှင့်တင်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပေကျင်းမြို့၌ ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရားဝင်နေရာ ပြန်လည်ရရှိခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား၌ ရှီက ယခုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှီက နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းသည် ဒေသဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများအပြင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် အကြမ်းဖက်မှု ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံရေးစသည့် အရေးကိစ္စများကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဆိုသည်။ ” ပိုမိုအားကောင်းသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ၊ ပိုမိုထိရောက်သော နိုင်ငံပေါင်းစုံ ယန္တရားများ နှင့် ပိုမိုတက်ကြွသော ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်သာ ”၎င်းအရေးကိစ္စရပ်များကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီကပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
1st LD-Writethru: Xi calls for closer cooperation to address global challenges, issues
BEIJING, Oct. 25 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Monday called on the world to step up cooperation, and work together to address the various challenges and global issues facing humanity.
Xi made the remarks in Beijing ataconference marking the 50th anniversary of the restoration of the People’s Republic of China’s lawful seat in the United Nations.
The international community is confronted by regional disputes as well as global issues such as terrorism, climate change, cybersecurity and biosecurity, said Xi. “Only with more inclusive global governance, more effective multilateral mechanisms and more active regional cooperation, can these issues be addressed effectively.” Enditem